अन्तत माओवादीले देश को अर्को अक्षुण र अबिचलित शक्ती नेपाली राष्ट्रिय शेना को मुन्टो बटार्न सफल भयो । कानुन त गलत भन्ने आधार नभए पनि मनोबैज्ञानीक रुपमा शेना लाई तहस नहस पार्ने कोशीस को एक पाइला अगाडि बढेको छ । ८ जना जर्नेल हरु को म्याद नथपेर बाँकी अरु शेना का बरिष्ठ हाकिमहरुलाई मानसिक प्रहार मात्रै गरेको छैन प्रशासन र प्रहरीमा झै पदोन्नति र म्याद थपको लागि नेताको ढोका ढोकामा झोला बोकेर कुद्ने अनी जनता र राष्ट्रको दुहाइ दिएर मात्र नपुग्ने अवस्थामा शेना लाई पुर्याइ दिएको छ । माओवादीले अबको दिनमा शेना समायोजनका मामलामा बर्तमान प्रधान शेनापतीले झै कुनै शैनिक जर्नेलले उस्को बिरोध नगर्ने गरी प्रत्यक्ष रुपमै चेतावनी दिएको छ । माओवादी समर्थक पत्रीकाको समाचार ले त्यही शन्देस दिन्छ । अब पदोन्नति हुने शेनाका जर्नेल स्वत: माओवादी प्रती अनुग्रहित हुने र सम्भाबित हस्तक्षपको बिरोध वा टक्कर कसैले नलिने हुँदा माओवादीको जन गणतन्त्र को ढोका खुल्दै छ । पूर्व प्रधान मन्त्री सहित ६ दलका नेताले निर्णय सच्याउन गरेको अनुरोध लाई लत्याएर प्रचन्डले आफ्नो अधिनायकिको पूर्वभ्यास मात्र गरेनन सहमतिको राजनीति लाई आर्यघाट पुर्याइ दिये । बाँकी सत्तारुढ दलहरु कुन स्वार्थले माओवादीको अधिनायकि लाई समर्थन गरी मन्त्री परिषदमा बसिराखेका छन ? माधव नेपाल जि ले स्विकारे झै ससद बादी दलले गरेको गल्तीले त्यस को परिणाम अब देश एक तन्त्री कम्युनिस्ट ब्यबस्था मा भास्सिने र कम्बोडिया वा अफगानिस्तान्को बाटोमा लम्किने छ । निरन्कुस राजतन्त्र सित सम्झौता हुन सक्दथ्यो र भएको पनि हो तर अधिनायक बादी कम्युनिस्ट सित सम्झौता गरेर प्रजातन्त्र आएको ईतिहास छैन । फेरी लामो र रक्तपात पूर्ण बिद्रोह गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
"....... सक्यो दैलो देख्यो” भने झै ' हतियार धारी माओवादी लाई निर्वाचनमा लगेर ठुलो गल्ती भयो भन्ने एमाले बिशेष गरी माधव नेपाल प्रबृतीहरु नेपालको राजनीति फाँटमा देखिनुको औचित्य छैन । महाकाली सन्धि को बारेमा बितन्डा मच्चाएर पछी समर्थन, प्रतिगामी आधा सच्चियो भनी सरकारमा जाने, १२ बुँदे सम्झौता देखी माओवादी लाई सरकारमा समेत हामीले पुर्यायौ भनी अस्ती सम्म भन्दै हिंड्ने एमाले आज फेरी गल्ती भयो भन्दै छ कस्तो लज्जास्पद नीति ?
माओवादी सर्बसत्ताबाद लाई टेवा पुग्ने अर्को शन्देस देशले पाएको छ, त्यो हो स्व बि यु निर्वाचन को परिणाम । भबिष्यमा दलको प्रतिनिधित्व गर्ने युबा पुस्ता विद्यार्थीहरुको निर्वाचनमा यस पटक माओवादीका मन्त्री समेतले भाग लिएर स्व बि यु कब्जा गर्ने घोषणा गरे । अनेकौ झडप र एक विद्यार्थी को मृत्‍यु समेत भयो । कतिपय राजनैतिक बीष्लेशकले यस लाई दलको हैसियतको जनमत संग्रह नै भनेका छन । माओवादी समर्थक विद्यार्थी समुह क्रान्तिकारीको प्राबिधिक रुपले तेस्रो स्थान भए पनि अब उ प्रथम स्थान बराबर हो । किनकी एकले सय लाई आतंक गर्न सक्ने हुँदा तेस्रो भएको क्रान्तिकारीको अगाडि बाँकी दुईको केही नचल्ने निस्चित छ ।
यस हिसाबले अब देशमा काङ्रेस, एमाले र माओवादी बाहेकका दलको राजनैतिक भबिष्य समाप्त नै भएको देखिन्छ । उनीहरुको कुनै अस्तित्व र हैसियत नै देखिएन । त्यसैले समान सिद्धान्त र निती भएका दलहरु एक अर्कामा पलायन ( बिलय ) भएर प्रमुख राजनैतिक दलको अस्तित्व जोगाउने र माओवादीको एक तन्त्रिय अधिनायक बादको बिरुद्ध गोलबद्ध नहुने हो भने कसैको पनि अस्तित्व बाँकी रहन्न ।
यस हिसाबले अब देशमा काङ्रेस, एमाले र माओवादी बाहेकका दलको राजनैतिक भबिष्य समाप्त नै भएको देखिन्छ भन्नु भयो। हुन त अहिले जस्ले सक्यो उस्ले लतार्ने चलन छ। तर गएको चुनावको परिणाम हेर्दा लाडा मुग्रा गर्नेहरुले पनि चुनाव जित्न सक्छन भनेर देखाएको छ। सायद लाठा मुंग्राले त्यती काम नगरेको हो कि स्वबियु चुनावमा?